Silubheke ngabomvu nathi kuleli zwe uhlelo lukaFacebook lokutakula amabhizinisi asafufusa, kuloba uNtokozo Biyela - Umbele I SMME Profiles I Labour I Economics I Agriculture I Executive Interviews I Personal Finance News
Ezinsukwini ezimbili ezedlule ngithunyelelwe indaba esematheni ngomunye wabangani bami engangifunda nabo, uMenzi Mvelase. Ungithumele indaba ebithi uFacebook usunqume ukuthenga wonke ama-invoice angakhokhelwe ezinkampani ezisafufusa, ezabantu besifazane nezimindeni entulayo yabantu abamnyama.
Ikhiphe imali ku$100 000 000 (engalinganiselwa uR1.4 billion) ukusiza ukukhokha ama-invoice amabhizinisi amancane, awabantu besifazane nawabaqhamuka emiphakathini entulayo. Loku kushayelwe ihlombe elikhulu ngosomabhizinisi abancane baseMelika ukuthi inkampani enkulu kangaka ibambe iqhaza elibonakalayo ekusizeni nasekusimamiseni amabhizinisi amancane asenkingeni yokungakhokhelwa.
Enye yezinkinga ezinkulu amabhizinisi amancane abhekana nazo eyokungakhokhelwa ngesikhathi. Loku kuyingozi enkulu eyenza amabhizinisi amancane azithole esefadalala, ewa. Maningi kakhulu amabhizinisi lapha eNingizimu Afrika asevalile ngenxa yokulinda inkokhelo.
Uma ubuza amabhizinisi amancane amaningi, ikakhulukazi asebenza nohulumeni, uzothola ukuthi awiswe wukungakhokhelwa ngesikhathi. Maningi amabhizinisi angaqinisekisa ukuthi wona sekuphele izinyanga ezisuka kweyizisuthupha kuya eminyakeni engakhokhelwa. Amanye aseze avala ngoba kungasasebenzeki.
Ngaphandle nje kokuthi kunzima kakhulu ukuvula ibhizinisi eNingizimu Afrika, amabhizinisi amancane abuye abhekane nengwadla yenkokhelo. Siyazi-ke sonke ukuthi alikho ibhizinisi elingaqhubeka lisebenze uma kuwukuthi liyasebenza kodwa alikhokhelwa. Kunesisho sesiNgisi esithi “imali ebhizinisini ifana ncamashi nomoya noma igazi emzimbeni womuntu”.
Uma amaphaphu engasawutholi umoya wokuphefumula, kusho ukufa komzimba. Uma umzimba ungasatholi umsoco olethwa yigazi emzimbeni wonke kusho ukuthi umzimba ngeke usakwazi ukuphila kahle. Sonke siyazi ukuthi impilo yanoma yisiphi isilwane noma umuntu isegazini? Kanjalo-ke nempilo yebhizinisi isemalini.
Uma ibhizinisi lingasayenzi imali kusho ukuthi asisekho isidingo salo, kungcono livale noma oliphethe avele aliguqule alenze inhlangano enikelayo.
Nginethemba elikhulu-ke ukuthi lesi senzo esenziwa wuFacebook sizonabela nase-Afrika ngoba uma sikhuluma iqiniso usizi lwamabhizinisi amancane futhi aholwa abantu abamnyama luse-Afrika. Loku kungaletha umehluko omkhulu kakhulu ekusimamiseni amabhizinisi amancane e-Afrika.
Sithwele kanzima thina esisemabhizinisini eNingizimu Afrika ngokuthi ababhekene nokusimamisa amabhizinisi amancane yibo kanye abayinkinga ekuthuthukiseni amabhizinisi amancane.
Kungcono uma kulezi zinkampani ezibekelwe ukuthi zisize noma zisimamise amabhizinisi amancane kungaba khona abantu asebeke baphatha amabhizinisi, hhayi nje abantu abangakaze badayise ngisho uswidi noma amakinati impilo yabo yonke kodwa bathatha izinqumo ngezimali okumele zisimamise amabhizinisi.
Ngivame ukuthi ukuze ube mnkantshubomvu kwezamabhizinisi kufanele ulisebenze ibhizinisi noma ube yingxenye yebhizinisini, hhayi ukusebenza ngolwazi lwencwadi. Ulwazi lwencwadi luhle impela kodwa luyingxenye encane ekufundeni ukuphatha ibhizinisi. Akusizi ukuba namaphupho ngokwenza ibhizinisi kodwa ungafingqi imikhono usebenze ukuze uthole amava okuphatha ibhizinisi.
Ngithanda ukubuyela kumngani wami uMvelase, insizwa esidabuka nayo eNquthu, enyakatho yeKwaZulu-Natali. Le nsizwa ave ngiyihlonipha ngegalelo nesibindi enaso empilweni nje. Siyaziqhenya ngaye kakhulu edolobhaneni lethu elincane ngokuba yinsizwa yokuqala eshayela izindiza ezinkulu yasemakhaya.
Akazange kuphela abe ngowokuqala kodwa wagcina esegqugquzela nomfowabo omncane ukuthi naye ashayele izindiza ezinkulu. Ngingasho ngingananazi ukuthi empeleni umndeni wakwaMvelase yiwona wodwa umndeni okuqhamuka kuwona izelamani ezishayela izindiza eNingizimu Afrika. Ngaphandle kokushayela izindiza, le nsizwa inebhizinizi lokupaka izimoto esikhumulweni sezindiza i-OR Tambo.
Ngiyafisa futhi nginethemba lokuthi uFacebook uzolusheshisa uhlelo lokusiza amabhizinisi amancane lufinyelele nakuleli zwe maduze. Kwazi bani amabhizinisi amancane angazithola esekwazi ukuphefumula kancane, asimame?
UBiyela uwumeluleki wosomabhizinisi ngaphansi kwenkampani yakhe, iMindset Shift Consulting.